समाचार – Page2– Naulo Khabar
२७ जेष्ठ २०७५, आईतवार 1 Views
जेठ महिनाको चर्को घाम त्यसमा पनि खेतीपातीको समय । गाउका मानिसहरु खेतीपातिमा ब्यस्त हुने समय भएतापनि शनिवार कास्कीको मौजामा भने छुट्टै रौनक देखिन्थ्यो । सधै घरको काम र खेतीपातीमै ब्यस्त हुने मौजा गाउ वरपरका महिला […]
२४ जेष्ठ २०७५, बिहीबार June 7, 20186Views
नेपालको पहाडी तथा मध्यपहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सिमान्तकृृत आदिवासी जनजाति अन्तर्गत पर्ने चेपाङ जातीहरुले भावी पुष्ताको बारेमा चिन्ता ब्यक्त गर्न थालेका छन । भिरालो, पाखो र जंगलको छेउछाउमा रहेका एलानी र अब्यवस्थित जमिनमा बसोबास गरी […]
मादीमा लैंगिक सामाजिक समाबेशीकरण तालिम सुरु
कास्की जिल्लाको मादी गाउँ पालिका वडा नं. ८ को आयोजनामा भएको चार दिने महिला, बालबालिका, शिक्षा, स्वास्थ्य र लैंगीक सामाजिक समाबेशीकरण जनचेतनामूलक कार्यक्रम सोमबारदेखि सुरु भएको छ । तालिममा वडा अध्यक्ष यमबहादुर गुरुङले लैंगिक जनचेतनामूलक […]
कृष्ण रानाभाट । ४५ औं बिश्व बाताबरण दिवसको अबसरमा मादी गाउँ पालिका वडा नं. ८ नागीधार, पाखुरीबोटमा रहेको प्रभात आधारभूत बिद्यालयको आयोजनामा विविध कार्यक्रम गरेको छ । गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोग तथा बाल हितकारी परियोजना नेपाल […]
विख्यात फेसन डिजाइनर केट मृत फेला
२३ जेष्ठ २०७५, बुधबार June 6, 2018 13 Views
विख्यात फेसन डिजाइनर केट स्पेड मृत भेटिएकी छन् । उनी आफ्नो न्यूयोर्कस्थित म्यानहट्टन अपार्टमेन्टमा बुधबार मृत अवस्थामा भेटिएकी हुन् । न्यूयोर्क प्रहरीले केट आफ्नै अपार्टमेन्टमा मृत फेला परेको पुष्टि गरेको छ । केटलाई उनकी घरेलु कामदारले […]
२३ जेष्ठ २०७५, बुधबार 12 Views
साउदी अरबमा पहिलोपटक महिलाहरुले ड्राइभिङ लाइसेन्स (चालक अनुमति पत्र) पाएका छन् । सोमबार १० जना महिलाहरुलाई लाइसेन्स वितरण गरिएको छ । यसअघि साउदीको क्राउन पिन्स मोहम्मद बिन सलमानले महिलाहरुलाई ड्राइभिङ लाइसेन्स नदिने नियम हटाउने ऐतिहासिक […]
२३ जेष्ठ २०७५, बुधबार5Views
पोखरा। सादा पोशाकका प्रहरी हौ भनी दोहोरी सांझमा धम्काइ हिड्ने ४ जना ब्याक्तिलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पक्राउ गरेको छ । रात्रीकालिन चेकिङ गर्ने क्रममा कास्की प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक ओम बहादुर राना आफै चेकिङमा […]
पोखरा विमानस्थल अन्तराष्ट्रिय उडानका लागि अयोग्य
निर्माणाधिन पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल अन्तराष्ट्रिय उडानका लागि अयोग्य भएको सरकारी अध्ययनले नै देखाएको छ । आजको कारोबारको पहिलो पृष्ठमा यो समाचार छापिएको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको विज्ञ टोलीले पोखरा अन्तराष्ट्रिय […]
जब सुष्मा स्वराज चढेको विमान ‘हरायो’…
२१ जेष्ठ २०७५, सोमबार 8 Views
बीबीसी । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज ब्रिक्स देशको सम्मेलनमा भाग लिन दक्षिण अफ्रिका पुगेकी छिन् । स्वराजले दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसासँग भेट गरेकी छिन् । यद्यपी, शनिबार दक्षिण अफ्रिकाको यात्राको क्रममा सुष्मा चढेको विमान १४ मिनेटसम्म […]
२१ जेष्ठ २०७५, सोमबार June 4, 20189Views
पोखरा । कास्की प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक ओम बहादुर रानाले रातको समयमा हुने प्रहरी चेकिङलाई चुस्त दुस्त बनाउनका लागी आफै फिल्डमा उत्रिएका छन । सोमबार रातको समयमा राना आफै सवारी चेकिङ भएका स्थानमा पुगी प्रहरी […]